I-Penola Coonawarra Yesimanje, Indawo Enhle, Ukulala 3,
Penola, South Australia, i-Australia
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Robyn
Jabulela Iwayini Lamahhala, i-Wifi ne-NETFLIX njengoba uhlala futhi uvakashela i-Penola Coonawarra. Jabulela umuzwa okhululekile endaweni yethu emaphakathi. Yakhelwe ngesikhathi lapho uPenola ayeyikhaya lika-Mary MacKillop, iyunithi ihlanganisa ubuhle bomhlaba obudala, nesitayela esisha, sesimanje, nokunethezeka. Inakho konke ukunethezeka okulindelekile ukuze uhlale uphumule. Hamba uye kungxubevange yamakhefi, iminyango yegumbi elingaphansi, amagalari nezindawo zokudlela, ama-pubs nezindawo zokudlela. Abenzi bewayini, Abaculi kanye nezinhlobo Zokudala zibiza lesi sifunda ikhaya.
Akukho Ukubhema, Azikho Izilwane Ezifuywayo, Akukho Maphathi.
Igumbi lokulala elilodwa linombhede obanzi wenkosi, elinendawo yomlilo kagesi yokwengeza uhlamvu kanye ne-ambience yaleli gumbi elihle, kanti igumbi lokulala lesibili liqukethe umbhede owodwa othokomele. Qaphela: kufanele uhambe nge-BR2 ukuze ufinyelele i-BR1. Igumbi lokuhlala line-airconditioner yomjikelezo obuyela emuva ukuze uhlale unethezekile, nekhishi elihlukaniswe kahle elinazo zonke izidingo zakho okuhlanganisa nomshini wekhofi we-Nespresso.
Lona umgwaqo othule, oqanjwe ngoJohn Riddoch, omunye wabasunguli bendawo yewayini yasePenola Coonawarra. Iyunithi ingaphakathi kwebanga lokuhamba elilula kakhulu ukuya ezindaweni ezikhangayo zasendaweni, kanye nezindawo zokudlela zasendaweni, amabhikawozi, izindawo zokudlela kanye nezindawo zokudlela.
Isikhungo sikaJohn Riddoch singamamitha angama-200, isikhungo iMary MacKillop singama-200m, iPetticoat Lane iyi-250m, iPipers Restaurant iyi-150 m.
Iyunithi yethu isendleleni yohambo lokuhamba ngezinyawo lwe-Penola Historic Building oludumile, ngakho-ke ungaqala ukuvakasha kwakho okuyingqopha-mlando ngqo ngaphesheya komgwaqo.
Indawo yewayini edumile yase-Coonawarra itholakala kuphela imizuzu eyi-10 uma ushayela, lapho ungavakashela khona iminyango eminingi yaseceleni, izindawo zokudlela ezisesitayeleni, nemicimbi eminingi. Imigede yaseNaracoorte ingamakhilomitha angama-40, iMount Gambier Blue Lake ingamakhilomitha angama-50, ilokishi laseRobe, namabhishi ayo amahle aqhele ngemizuzu engama-35.
Ngiyatholakala uma kwenzeka kuba nesidingo ngohlelo lokusebenza lwe-Airbnb.
Hlola ezinye izinketho ezise- Penola namaphethelo